Kuwani waa faraqa u dhexeeya gabdhaha Shiinaha iyo Japan | Safarka Absolut
maruuzen | | Shiinaha
Calaamadee kala duwanaanshaha, isku ekaanshaha ama cilladaha Waa wax laga yaqyaqsoodo laakiin waa bini-aadamnimo oo macquul maaha in laga baxsado. Qof kasta oo safar ah oo soo mara America wuxuu ku dambayn doonaa inuu ka hadlo waxa ay yihiin reer Chile, Argentine, Cuba ama Mareykan.
Isla sidaas oo kale ayaa dhacda marka qofku u safro Yurub iyo waliba marka uu booqanayo Aasiya. Juqraafiga iyo taariikhda dhul kasta wuxuu qaabeeyaa nacasnimada dadkeeda, marka marka laga fikirayo quwadaha sida Shiinaha iyo Jabbaan Waxaan isweydiinaynaa Maxay ku kala duwan yihiin gabdhaha Shiinaha iyo Japan?
1 Shiinaha iyo Jabbaan
2 Haweenka Shiinaha
3 Farqiga u dhexeeya gabdhaha Shiinaha iyo Japan
Shiinaha iyo Jabbaan
Shiinuhu ma ahan dal fidiya. Si gaar ah uma aysan aheyn bellicose. Miyaad ka fikireysaa Tibet? Haa, laakiin waxay ka mid ahayd deegaanadooda muddo dheer ka hor duulaankii reer Yurub, markaa dood dheer ayaa halkaas ka jirta.
Waxa aan uga jeedo waa in dadka Shiinuhu ay yihiin dad fiirinaya xuddunta, marka si loo yiraahdo. Adigu aad uma xiisaynaynin dibadda adduunka xiriirkooduna wuxuu ahaa mid goos goos ah, danaynayey, badanaana ku qasbay quwadaha aan xasilloonayn ee Old Europe.
Marwalba waxaan qiyaasayaa in Marco Polo iyo socdaalayaasha reer Yurub ee soo socda waa inay dareemeen ama ay fekereen markay ku turunturoodeen soo jiidashada iyo qaabka maxkamadda boqortooyada Shiinaha. Waa yaabe! Ku dhowaad sida safarka meeraha kale.
Japan, taas lidkeeda, sida doqon kibir badan, wuxuu had iyo jeer indhihiisa saaraa cirifyada badda oo wuxuu doonayaa inuu ka gudbo iyaga. Waa dad dagaalyahan ah, inkasta oo maanta uu aad u deggan yahay, iyo taariikhda oo dhan qabsatay oo qabsatay in ka badan hal jeer Kuuriya oo ay la wareegtay boqortooyo aakhirkii noqotay Okinawa Japan.
Dhaqanka Shiinaha waa mid qadiim ah oo qani ah taas oo aakhirkii saameyn ku yeelatay isla markaana qaabaysay dhaqammada deriska. Dhamaantood way ka soo guuriyeen iyada waana sababtaas ka kanji Jabaaniisku waa fikradaha Shiinaha, si aan tusaale u siino.
Sidaan horay u sheegayba, juqraafiga iyo taariikhdu waxay qaabeeyaan aadamaha. Haweenka Shiinaha waxay arkeen noloshooda oo isbedelaysa qarniyo badan laakiin asal ahaan waxay soo mareen isbedeladii ugu weynaa uguna fiicnaa inta lagu gudajiray sanadihii ugu dambeeyay ee Boqortooyada qing, Dagaalkii Sokeeye iyo markii shuuciyadu guuleesteen ee la aas aasay Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha.
Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, haddana guurka iyo taranka ayaa qayb muhiim ah ka ah nolosha haweenka. Guurka la isku habeeyay wuxuu ahaa xukunkii kacaanka ka hor waana uu ahaa laga soo bilaabo sharci soo baxay 1950 oo dawladu isku dayday inay bedesho kahortaga dumarka mamnuucaya naagihii addoomada ahaa, guurkii badnaa iyo xaasas badan, tusaale ahaan.
Kadibna waxaa yimid Kaliya Sharciga Carruurta, 70-kii. Dabcan, weligoodba way jireen, way jiri doonaan wayna jiri doonaan kala duwanaanshaha miyiga iyo magaalooyinka.
Maanta, gacanta ayaa lagu hayaa fikradda «Hal dal, laba nidaam«, Haweenka Shiinaha ee ku nool magaalooyinka waxay aad ugu egyihiin dumarka reer galbeedka laakiin wali aynan ku guuleysan inay ka baxsadaan waajibaadka saaran carruurta iyo qoyska waxayna la kulmaan shaqooyinkan laba-laabma sida haweenka kale ee meeraha adduunyo.
Xaaladda haweenka ee Japan ayaan ahayn mid aad uga duwan sidii hore. Haweenka Japan waxay u adeegeen waalidkood inay xakameeyaan noloshooda oo dhan. Haduu aabbe lahaynna, kan walaalkiis. Guurka la qorsheeyay wuxuu ahaa mid caadi ah xaaladduna waa sidii Shiinaha, waxay uun is bedeshay qarnigii XNUMXaad iyo gaar ahaan qabsashadii Mareykanka Dagaalkii Labaad kadib.
Laakiin inkasta oo Japan ay tahay dal horumaray, halkan dumarka waxay sii wadaan inay ka qaadaan wax kayar ragga isla shaqooyinka. In kasta oo aysan miisaamin sharciga cunugga keliya, haddana kharashyada ku baxaya masruufka carruurta aad ayey u badan yihiin oo waxay leeyihiin hal ama laba carruur ah oo keliya sideedda saacadood ee shaqada waxaa si fudud loogu kordhiyaa toban ama laba iyo toban.
Nin Jabaaniis ah wuxuu ka filayaa xishood, xishood gaar ah, xushmad haweenkiisa iyo inuu daryeelo doorarka guriga. Jiilalka soo koraya si adag uma raacayaan tan laakiin waa wax wali la dareemayo.
Ma dhihi karo gabdhaha Japan waa geis gebi ahaanba, taasi waa sawirka reer Galbeedka, laakiin gudaha albaabbada iyo falanqaynta cilmiga bulshada iyadoo halkan la marayo wax la mid ah ayaa ka dhacaya adduunka intiisa kale. Waxaan soo marnay waddo dheer, gabdho, laakiin wali waxaa jira ...
Marka hore, waa in la caddeeyaa in liiskan aan loogu talagalin inuu cid ku xumeeyo. Iyagu waa wax guud maxaa yeelay way adag tahay in laga hadlo bulsho iyada oo aan xubin ka ahayn. Su’aalahan oo aan hadda ka hadli doonno waxay ku saleysan yihiin indho indhayn shaqsiyadeed, faallooyin, fikradaha la iska aaminsan yahay, ra'yiga Shiinaha, Jabbaan iyo ajaanibta. Marka fadlan ha xanaaqin.
Bar wanaagsan ama dhagxaanta taabashada sameynta liistada kala duwanaanshaha iyo isku ekaanshaha waa taariikh siyaasadeed: Kacaankii Shiinaha wuxuu si weyn u saameeyay doorka haweenka Shiinaha bulshada dhexdeeda. Sharci ahaan, waxay qabsadeen hal daqiiqad illaa daqiiqad kale isla xaaladda ragga oo taasi aad ayey muhiim u ahayd.
Dhinaca kale, Japan waxay si dhakhso leh ugu beddeshay awood warshadeed sidoo kale in haweenka Jabbaan ay ogaayeen tobanaan sano inay ku nool yihiin mid ka mid ah quwadaha waawayn ee Aasiya. Dibad ahaan waa dumar naxariis badan, aamusan oo xoogaa xishood badan, laakiin waa ku filan tahay inaad in yar dalka ku noolaato si aad u ogaato saxafiyiinta, siyaasiyiinta, farshaxanleyda iyo haweenka dariiqyada aad u firfircoon, oo aan aamusnayn haba yaraatee.
Gabdhaha Japan ayaa aalaaba guursada wiilasha da'doodaMarkay dhammeeyaan jaamacadda, oo ay isla bilaabaan nolol shaqo, oo ay ku yar yihiin carruurta iyo dadaal badan. Lamaanuhu waa muhiim shaqaduna sidoo kale. In kasta oo ay jiraan guur isku dhafan, haddana ma aha kuwa ugu badan. Ajaanibta ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan laakiin waa dhif in ay doortaan mid ay guursadaan.
Shiinaha, tan ka soo horjeedaa waa run. Qaar badan baa sidaa leh Haddii haweeney u dhalatay Shiinaha ay suurta gal tahay inay guursato ajnabi, waa wax ay ka faa’iideysan doonto. Waxay xiriir dhaw la leeyihiin sodogooda iyo sodohda soddohdu waxay sii wadaan inay qaadaan miisaanka aan loo baahnayn ee guurka.
Maalmahan, macaamiil badan ayaa jira, ma jiraan warar yar oo muujinaya taas in badan oo gabdhaha Shiinaha ka mid ah waxay doortaan inay guursadaan rag waaweyn iyo maal qabeenno halkii aad si siman ula lahaan lahayd dadka da'diisa ah. Ku adkaysiga waalidkeed xagga lacagta iyo amniga dhaqaale waa mid xoogan.
Halkaan waxaan ku sameynayaa kormeer shaqsiyeed maxaa yeelay waxaan haystaa saaxiib Shiine ah: gabar walaasheed ah ayaa guursatay farsamo yaqaan koronto ku shaqeeya oo iyagu ma aysan jeclayn gabi ahaanba maxaa yeelay ma aysan haysan oo ma heli doonto lacag ku filan. Walaasheed kale waxay guursatay maareeye shirkad Mareykan ah mana dhigin laakiin. Wax kastoo ay yiraahdaan, lacagta si Shiinaha aad bay u daneynayaan.
Marka maxaa kala duwanaansho ah oo aan ka dhex heli karnaa gabdhaha Shiinaha iyo Japan? Waxaan idinku martiqaadayaa inaad qoslaan oo aad wada fikirtaan:
Haweenka Shiinaha waxay neceb yihiin sodohdoda halka gabdhaha reer Japan ay u haystaan ​​inay yihiin hooyooyinkoodii labaad
Haweenka Shiinaha aad ayey caadi ugu yihiin sariirta halka dumarka Japan ay aad u firfircoon yihiin.
Haweenka Shiinaha ayaa ku cabaada raggooda markay guriga ka soo daahaan xilli gabdhaha Japan ay faham badan yihiin, in kasta oo mararka qaar aysan ka imaanin shaqada laakiin ay ka yimaadaan baarka ay kaga takhalusaan culeyska shaqada.
Haweenka Shiinaha way aqbalaan oo waxay raadiyaan guurka shisheeyaha halka gabdhaha Japan ay u arkaan inay sharaf dhac tahay.
Haweenka Shiinaha ee da'da yar waxay door bidaan ragga da'da weyn, horeyba u aasaasay uguna taajirsan, inay guursadaan. Gabdhaha Japanese-ka ah badanaa waxay la midoobaan qof da'dooda ah.
Hooyooyinka reer Japan waxay bartaan gabdhahooda inay raadsadaan nin iyo inay si wanaagsan ula xiriiraan sodohda halka hooyooyinka Shiinaha ay ku adkeystaan ​​gabdhahooda inay xukumaan arrimaha qoyska iyo ninka.
Haweenka reer Japan way u dulqaadan karaan nin aan lacag haysan laakiin sifiican umala dhaqmaan fuleyda ama kuwa jilicsan. Shiineeska gadaal.
Haweenka reer Japan waxay u muuqdaan kuwo u dabacsanaan kara gaalnimadooda lamaanahooda halka dumarka Shiinaha ay aad ugu jilicsan yihiin tooda. Xaqiiqdii, Shiinaha arrimaha guurka ka baxsan ee dumarka ayaa ah amarka maalinta.
Si loo dhammeeyo waa in sidaas la dhaho labada haweenba waa halgamayaalWaxay yaqaanaan sida loo caawiyo qoysaskooda taariikh ahaanna waxay la soo mareen waqtiyo adag, dagaal iyo gaajo. Waxay arkeen raggoodii oo dagaal u baxa oo aan soo laaban ama soo laaban iyagoo lumay, waxay u baxeen naftooda inay shaqeeyaan saacado badan iyo xitaa maanta, sida ku dhacda dumarka adduunka oo dhan, ma aqoonsana shaqada labalaabka ah ee ku lug leh qoys yeelashada iyo naag xirfadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Farqiga u dhexeeya gabdhaha Shiinaha iyo Japan
Qoraalkani waa been abuur dhammaystiran, edeb darro iyo ixtiraam la’aan aad u weyn.
Haddii aad laba farood ku leedahay xagga hore, isla markiiba waad iska saari doontaa.
Kaliya kuwa aan aqoon Shiinaha iyo Shiinaha ayaa ku doodi kara nacasnimada noocaas ah.
Gaar ahaan, kuwa aan hayno
Farxada la wadaaga nolosheena haweeney Shiine ama Taiwanis ah waxaan ognahay wadarta been abuurka mowduucyadan aan cadaalada aheyn.
Wax yar ayaad ku falaysaa bartaada adigoo u oggolaanaya in la daabaco.
Jawaab Jose Juan
Waad salaaman tihiin, codka boostada ma ahan mid meel ka dhac ku ah. Liiska ayaa ku wareegayay websaydhka Shiinaha muddo dheer waana qosol, wax halis ah ma jiraan. Aruurinta guud ee tan oo kale ah ayaa ka jirta adduunka oo dhan dabcanna waxay u muuqdaan kuwo ka been badan runta, laakiin taasi maahan sababta uu qofku u joojiyo kaftanka arrintaas. Hambalyo lamaanahaaga faraxsan.
Ku jawaab maruuzen
Waan ku raacsanahay Blogga, waxaan ku noolaa Shiinaha 3 sano badankooduna waa sidaa !!! Haddii aad qabtid haweeney reer Taiwan ah, ha ka iibsan haweenka Shiinaha ee Jamhuuriyadda Dadka, waxay dareemi doontaa caro iyo sabab macquul ah!
Waa run sida ay been u tahay, waxaan la joogay laba dumar Shiine ah, waana sababta aan u ogahay, wax kasta oo uu yidhi inay run yihiin, oo kaliya in aanay kulligood sidaa ahayn, kiiskayga gaarka ah labadoodaba way isqabeen oo way la hadli karaan ninkeyga inta ay xiriir ilalahaayeen, marka waxa gaalnimadu gabi ahaanba waa run, laakiin sikastaba ma aaminsani in dhammaantood ay sidaas yihiin laakiin badankood ay yihiin.
Waad salaaman tahay, waxaan joogaa Shiinaha, waxaanan kuu sheegi karaa taas aniga ahaan badankood, haddii ay sidaas yihiin, waxay daneeyaan oo keliya lacag, waxaan leeyahay saaxiibo la casheeyay lammaanayaashooda oo ay ku lumiyeen iyaga dartii, iyaga waa la bilaabay waana haddii nimanku ajnabi yihiin uffff waa sida muusikada loogu talagalay dhagahaaga, waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan daryeelno cilaaqaadkeena.
Haddii Japan ay aad uga weynaan lahayd, badh bina-aadamnimada ayaa tagi lahaa halkaas, sax? taasi waxay ila tahay
hahaha in funny sababtoo ah kaftanka dadka waa wanaagsan yahay. Inaad noqoto warbixin culus dabcan in wax waliba been yihiin.
Shiinaha iyo Kuuriya ayaa aad uga cunsuriyad badan kuwa Jabbaan, aad ayey uga sahlan tahay inaad aragto qof Jabaaniis ah oo ajnabi guursanaya marka loo eego kan Shiinaha ama Kuuriyaanka ah, dhaqanka Japan ayaa aad uga furan, waan ogahay maxaa yeelay waxaan lahaa gabar Kuuriya ah oo Waxaan bartaa luuqada Jabbaan, waana sababta aan ula falgalo wax badan oo sanadkii hore waxaan joogay Tokyo muddo bil ah.
Iyo turkiga qortay faalkan nacasnimada ah, ma Isbaanishbaa, mise iyadu waa dhidid dhicis ah? Waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah, in dalkayga, dabdamisyada Isbaanishku ay aad uga maseyraan dumarka Aasiya, waxay umuuqdeen inay u dhinteen xaasidnimo markii aan mid baan la socday, markaan la joogo saaxiibteyda Filibiin, dumarka Isbaanishka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo miyir beelay.
QORAALKAN WAA MIDHAHA XAASIDKA, BOGGAYGU WAA KA BADAN YAHAY TAN, UGU YARYAHAY WAAN OGAAHAY WAXAAN QORAY
Ku jawaab tpkshark
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay balooggan, waxaan leeyahay saaxiibo Shiineys ah, Jabaan iyo Kuuriya. Guud ahaan, haweenka Jabaan iyo Kuuriya waa kuwo aad u qaas ah oo aamin ah, laakiin haweenka Shiinaha waa waxyaabo kale, waxay xiiseynayaan ragga ajnabiga ah laakiin ka sarreeya lacagtooda.
Aniga kuwa ugu fiican waa Kuuriyaanka kuwa ugufiican, ixtiraamaya Shiinaha iyo Jabbaan, waxaan guursaday mid qurux badan oo kamid ah wayna i taageertaa.
Ku jawaab Peter zapatol
Waxay umuuqataa in haweeneyda Shiineeska ah ay wax ku sameysay, sida inay kaxeyso saaxiibkeed, ama wax xun ... maxaa yeelay waxay muujineysaa sun ku socota haweenka Shiinaha. Iyadoo lagu xisaabtamayo in dumarka reer Japan ay sidoo kale leeyihiin cillado badan (ohh la yaab !!… sida qof walba u dhow) ,. Si caddaalad loo ahaado, Aasiyaanka guud ahaan waxay umuuqdaan kuwa dusha sare ka muuqda qormooyinkooda quruxda, waxay umuuqataa in wax walba loo sameeyay gabdhaha yar yar ee u dhexeeya 15 iyo 25 sano. Sababtaas awgeed, sida dumarku u baaba'aan ... Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay sababta ay ugu xishoonayaan inay u ekaadaan oo u dhaqmaan sida gabdhaha, in kasta oo aysan muddo dheer joogin. runti, waxaa jira haween sanado badan jiidaya oo isku dayaya inay u ekaadaan gabdho yar yar oo 20 jira.
Waxaa jira xikmado badan oo magaalooyinkaas ah, laakiin waxyaabo badan oo maqaar saar ah too. sida dhammaan.
Ku jawaab lorena0007
Ma aanan rumaysan markii aan arkay in tan ay qortay haweeney ... Caadi ahaan yaa horumar sameeya oo xiidmaha afkeeda ka sii deynaya bilowga shaqada. Haddii dhamaadka waxaad yeelan doontaa dhisme reer galbeed ah iyo wax walba, hahaha. Oo aad ka jawaabto faallooyinkii ugu horreeyay ee aad xumaatay (sabab macquul ah) oo aad ku tidhaahdo taasi ma aha kaftan weerar ah ... Wax karaahiyo ah, maxay tahay xumaan ay dumarka qaarkood naftaada ku sameeyaan. Kadib si aad ula dagaallanto si aysan kuuguula dhaqmin sidii qaybo hilib ah. Faalladani malaha lama daabici doono, illaa iyo inta ay ugu adeegayso qoraaga fekerka ugu yar, waa igu filan tahay. Atte: Machirulo.
?? Waa hagaag, waxay muujineysaa inaad ku jirto dhinaca Jabbaan. Anshax? Hiddo-wadaha wanaagsan? ?? Haa, Japan ha noolaato !!! Ha noolaado dalka ku dhawaaqaya dagaal ka dhan ah wadamada kale !!! Ha noolaado dalka oo xuquuq badan oo aadanuhu aan laga fulin! Ha noolaado dalka ugu wanaagsan bulshada ugu fiican, ee caawinta dadka kale ay dhif tahay (ma dhahayo taasi ma dhacdo, laakiin ha la qabto…) !!! Noolow sharraxaaddaada iyo doodahaaga ku saabsan Jabaan!
Hal su'aal, goormaad booqaneysaa Japan, mise horay ayaad u sameysay? Sababtoo ah waxay kugu aqbali doonaan markii ugu horeysay ereyada weyn ee aad u hurto iyaga. Hiddo-wanaagga wanaagsan, edbinta weyn iyo dareenka ah inaad caawiso kuwa kale adigoon ka waaban… HA! Inaadan xitaa rumeysan doonin. Wiil, ma ogi halka aad internetka ka heshay xogta noocaas ah ama buugaagta aad ku baratay. Hadaad awoodo, iigu jawaab aniga waan aqriyay (tanina maahan kaftan, maxaa yeelay waan aqrin doonaa hadaad ii sheegto, dabcan, adigoon kaftamin) waana arki doonaa hadii fikrada Jabbaanku isbadashay.
Ma ogtahay? Waxaan ku soo gunaanaday in adduunka ay jiraan dad aad u tiro badan oo difaaca Jabaan laakiin aan waligood ahayn Shiinaha. Waxay si xun uga hadlaan dumarka Shiinaha, laakiin kuwa Kuuriya, Taiwan, iwm, wax dhibaato ah ma qabaan (weligoodna si xun looma hadlo). Haweenka reer Japan waa hooyooyinka guriga ku fiican, hooyooyinka wanaagsan… laakiin dumarka Shiinaha waa xun yihiin. Qof kastaa waa qof, qof walbana wuu fiicnaan karaa ama xumaan karaa, laakiin u dhexeeya Shiinaha iyo Jabbaan waxaa jira kala duwanaansho laakiin dhinaca qoyska, faraqoodu ma badna.
Aah! Wax jawaab ah kama aadan hadlin ama kajawaabin, laakiin maahan inaad sidaas dhahdo waan dhihi doonaa. Haddii faallooyinkaagu aysan sal lahayn, maahan inaan iska aamuso oo aanan difaacin waxa aan is leeyahay. Waxaa jira sharci difaacaya xorriyadda hadalka iyo sharci kale oo difaaca dulqaadka dadka kala duwan.
Waad salaaman tahay Miguel, lammaanahaygu waa Jabaan… iyo haa, waa waxa ugufiican ee igu dhacay noloshayda description. Sharaxaadu waxay igu raacsantahay aragtidayda ku saabsan gabadhayda …… haa… aad iyo aad bay u fiican yihiin!
Waad waalantahay. Waxay ahayd boosteejo guud oo aan muhiimad lahayn. Nabadeey.
Ku jawaab Picha
Jose Juan Majete, 7 sano ayaa kasoo wareegtay xilkiina, waxaan u maleynayaa inaad horeyba u ogaan laheyd sida xaaskaaga Shiinaha ay ugu dhejisey xitaa butanero oo ay gadaal iyo gadaalba ka rartay dhamaan xaafadaada iyo xitaa saaxiibkaaga ugu fiican ayaa dhigay iyada oo eegaysa Maka.
Marka hadaad caqli yar yeelatay waxaan filayaa inaad durba furtay.
Iyo qoraalkaaga soo socda waxaad ku ogaan doontaa wax yar oo ku saabsan waxa aan ka hadlayno.
Jawaab Gervasio Bib
Kuma raacsani doorka jinsiga, taasi waa wax la soo dhaafay, waxaan ka soo jeedaa Jabbaan iyo Tomboy ninkeyguna wuu i jecel yahay.
Noloshayda oo dhan waxaan raadinayay gabar ka socota waddan Aasiya ah, illaa iyo hadda ma aanan guuleysan. Kaliya markaan arko iyaga waan baqay, runti waan jeclahay iyaga ma garanayo sababta. Runtii waan jeclahay inaan maqlo codka haweeney Shiineys ah, xitaa haddii aanan fahmin, waan jeclahay wax walba oo iyaga ku saabsan. Waan jeclahay iyaga.